Hart Cottage - Hinds Feet Farm
Iri paHuntersville Campus, Hart Cottage imba yemibhedha mitatu (3) yakagadzirirwa kuzadzisa zvinodiwa nevanhu vakuru vane kukuvara kwehuropi avo vakazvimiririra nemabasa ese ekurarama kwemazuva ese (ADLs), asi vachida rubatsiro rwakapfava kusvika pakati nepakati uye kutariswa kuti vaite mabasa. uye gara wakachengeteka.
Sarudzo dzemari dzakagamuchirwa parizvino dzeHart Cottage dzinosanganisira mubhadharo wega, muripo wevashandi, inishuwarenzi yemotokari, inishuwarenzi yemhosva, Medicaid innovations waiver, uye mari yenyika. Mari yemishonga yekunyorerwa nemishonga, zvekushandisa pakurapa uye zvekushandisa, kushanya kwachiremba uye kurapwa, uye chero mimwe mari yekuwedzera ine chekuita nekurapwa haisanganisirwe mumutengo wezuva nezuva wemugari wega wega.
Hart Cottage inopa vagari ne24-awa, 7-mazuva pasvondo tarisiro uye inotaridzwa tsigiro yakatenderedza yekutarisira wega (kushambidzika, kuchengetedza imba, kuronga chikafu nekugadzirira, nezvimwewo). Imba yacho ine vashandi zvichibva pamaawa gumi nemaviri akasvinura vashandi vanochinja. Kuchinja kwezuva kunoitika pakati pe12am-6pm, uye kuchinja kwehusiku kunoitika pakati pe7pm-6am. Isu tinochengetedza hushoma hwe7: 3 vagari kune reshiyo yevashandi.
Vashandi vedu vane hushamwari zvakare vakazvipira kubatsira vagari kuti vawedzere kugona kwavo uye hupenyu hwehupenyu nekupa mikana kune vagari kuti vavandudze magariro, mashandiro, uye hunyanzvi hwekutaurirana. Vagari vedu mukubatana nevashandi vedu vacharonga zvemagariro uye zvekuvaraidza zviitiko mumba uye munharaunda. Vashandi vedu vanozofambisawo manejimendi evagari, kugadzwa, uye kutonga kwemishonga.
Mugari wega wega achave nekamuri yega. Kamuri rega rega rakagadzirwa kuti rive nemahwindo maviri akakura ane maonero ane runyararo epurazi redu remaeka makumi matatu nematanhatu. Vagari vanozogovana imba yekugezera ine huwandu hwemumwe mugari uye vanopihwa nzvimbo yekuchengetera zvimbuzi zvavo. Sarudzo dzekudya kunovaka muviri dzakagadzirwa nemaune kuti dzisangane nezvinodiwa zvekudya uye zvehutano zvemugari wega wega. Pamusoro pezvo, kamuri nebhodhi remugari wega wega zvichasanganisira zvekushandisa, mabasa ekuchengetedza imba, zvekufambisa zvishoma, uye kuwana kuChirongwa chedu cheZuva.
Zvimiro uye maAmeni
Hart Cottage inotsvaga kupa vagari vedu nharaunda yakazara iyo yakarongedzwa kuti isangane nezvose zvavo zvemuviri, chengetedzo, zvehungwaru, zvekuziva, uye zvemagariro zvavanoda. Zvimwe zvezvimiro zvedu zvakasarudzika uye zvinowanikwapo zvinosanganisira:
Hart Cottage ndeye hurema hunowanikwa
Cable uye isina waya internet yekupinda mumba mese
Pa-campus recreation chivakwa chine mabhiriyadhi, air hockey, wii game system uye ½ court indoor gym.
Kutora chikamu mune yedu-saiti Zuva Chirongwa uye Therapeutic Horseback Riding Chirongwa
Kusvikika kune vashandi vedu vakadzidziswa vevakavimbiswa nyanzvi dzekukuvara kwehuropi
Nhengo dzemhuri dzinogamuchirwa nguva dzese! Hart Cottage haina maawa ekushanyira akaganhurirwa uye yakagadzirwa tichifunga nezvemhuri dzedu. Yedu yekuvaka chiitiko uye yekunze patio inowanikwa kune yakavanzika mhuri zviitiko uye kuungana zvichienderana nekuwanikwa uye kana Zuva redu Chirongwa chisiri muchikamu. Kune zvakare akasiyana siyana emahotera ari pedyo evaenzi vanoshanya kubva kunze kwedhorobha.